Naya Post Nepal | तपाईंको कपाल झ’र्ने, टु’क्रिने र रुखो हुने स’मस्या छ ? यो बिधि अपनाउनुस्
तपाईंको कपाल झ’र्ने, टु’क्रिने र रुखो हुने स’मस्या छ ? यो बिधि अपनाउनुस्
हाम्रो बरपर रहेको बढी फोहोरको का’रण बातावरण प्र’ दुषित बनी रहेको छ। त्यसैले हामी हिडडुल गर्दा हाम्रो कपाललाई प नि प्र’दुषित हावाको का’रण कपाल सुख्खा साथै झ’र्ने गराउछ छ। कपाल झ’र्न बाट रोक्न तथा क’पाल उमारर्नको लागि बजारमा धरै थरिका औष धी उत्पादन भइरहेका छन् तर हाम्रो समाजमा धरै जना क’पाल झर्ने स’मस्याबाट पी’डित हुने गरेका छन्।
क’पाल झ’र्ने स’मस्या विभिन्न का’रणले हुने गर्दछन् सामान्यतया तल दिएको का’रण कपाल झरेको पाइन्छ ।आज हामी तपाइलाई कपाल झ’र्ने का’रण तथा रोकथामको लागि घरेलु विधिहरुको यहाँ च’र्चा गर्ने छौ ।
कपाल झ’र्ने मुख्य का’रण
कपालमा धेरै चाया भए, धेरै चिन्ता लिए, निन्द्रा नपुगे, खानपान व्यवस्थित नभए, स्वास्थ्यमा ख’रावी भए, कपालमा गुणस्तरीय से’म्पुको प्रयोग नगरे।
कपाल झ’र्न रोक्ने घरलु वि’धि
कागतीको बीउलाई पिसेर कपाल खु’इलिएको ठाउँमा ले’प लगाउ नाले कपाल उ’म्रिन्छ। कपाल झर्ने स’मस्याबाट बच्न नरिवलको ते लमा अलिकति मेथीको दाना हा’लेर तताउनुहोस् । त्यसपछि यो तेललाई छा’नेर बोतलमा राख्नुहोस् । नि’यमित रूपले यो तेलको प्रयोग गर्नुहोस्।
नीम र बयरका पातलाई पिसेर कपालमा लगाउनुहोस्। दुई घण्टाप छि क’पाल धुनुहोस् । एक महिनासम्म यसो गर्दा कपाल झ’र्न बन्द हुनेछ र नयाँ कपाल उम्रिनेछ। कपालमा अमलाको रसले मालिस ग र्नुहोस्। खु’इलिएको ठाउँमा नयाँ कपाल उम्रिन थाल्नेछ। लसुनको तेल लगाउँदा कपाल झ’र्नबाट रोकिन्छ।
काउली र बन्दा नि’यमित खानाले कपाल झ’र्न कम हुन्छ।कागती को ताजा बोक्रालाई पानीमा हालेर बो’क्रा पूरै नगलुञ्जेलसम्म उमा ल्नुहोस्। पानीलाई बिस्तारै–बिस्तारै टाउकोमा रगड्नुहोस्। यसबाट टाउकोको पूरै मै’ला नि’स्किन्छ तथा कपाल झ’र्न रोकिन्छ।
एक सय ग्राम नीमको पातलाई एक लिटर पानीमा उमाल्नुहोस्, यस ले टाउको धुनुहोस् । टाउकोका फोकाहरू हट्नेछन्। साथै, खुइलिए को स्थानमा पनि कपाल उम्रिन थाल्नेछन्। टाउको धो’इसकेपछि नी मको तेल लगाउनुहोस्। अनारको पात पिसेर कपालमा त्यसको लेप लगाउनाले खु’इलिएको स्थानमा कपाल पलाउँछ।
कपाल खुइ’लिएको ठाउँमा हरियो धनियाँको रस लगाउनाले कपाल उ’म्रिन थाल्छन्। बन्दाको रसले नियमित म’साज गर्दा कपाल खु’इ लिने, टुक्रिने, झर्ने स’मस्याबाट बच्न सकिन्छ। केराको बो’क्राको मा लिसले क’पाल झ’र्ने समस्या हट्छ। ताजा सयपत्रीका पात मि’चेर कपालमा लगाउनुहोस्, एकदुई घण्टासम्म राख्नुहोस् र धुनुहोस्। नि यमित का’गती टाउकोमा र’गड्नाले पनि क’पाल उम्रिन्छन्।
हप्तामा एक या दुई पटक आ’धा कचौरा दहीमा एउटा कागती निचो रेर कपालमा लगाउनुहोस्। त्यसपछि नुहाउनुहोस्। कपालको जरा बलियो हुनेछ। महमा कागतीको रस मिलाएर जरामा लगाउनुहोस्। आधा घण्टापछि टाउको धुनुहोस्। एक महिनाभरि, हप्तामा दुई पट क यसो गरिए कपाल बलियो भएर झ’र्न रोकिनेछ। कपाल च’म्किलो बन्नेछ।
एक कागतीको रस, आधा क’चौरा तेलमा मिसाएर सुत्ने बेला कपा लमा लगाउनुहोस्, बिहान कपाल पखाल्नुहोस्। नरम हुनुका साथै कपाल झ’र्न बन्द हुनेछ दुई ठूलो चम्चा दाना मेथी रातभरि पानीमा भिजाउने। बिहान मसिनो पिसेर कपालमा लगाउनुहोस्। आधा घण्टा जति राख्नुहोस्। यसबाट कपाल झ’र्न कम हुन्छ र सु’क्खापन पनि हट्छ। कपाल खु’इलिएको ठाउँमा काँक्राको रस लगाउँदा पनि कपा ल उ’म्रिन थाल्छन्।
एक गिलास पानीमा दुई च’म्चा चियापत्ती हालेर उमाल्नुहोस्। चिसो भइसकेपछि यसमा कागती नि’चोर्नुहोस् । कपालमा दल्नुहोस् ।सुके पछि सफा पानीले पखाल्नुहोस्। यसो गर्दा कपाल स्वस्थ, च’म्किलो र ब’लियो बन्छ।
झर्नबाट रोक्न कपाललाई बा’फ दिइरहनुपर्छ । तुलसीका बीउलाई बेल या नीमका पातसँग उमालेर, त्यसले कपाल धुनाले ला’भ हुन्छ । भाङका पातको रसले मसाज गर्दा पनि कपाल झ’र्न ब’न्द हुन्छ ।
२०७८ पुष १९, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 193 Views